တေးသံရှင် ပိုပို အင်းစိန်ထောင် ရောက်ပြီ လို့ မိသားစုထံမှ သိရတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ Hu Go – Shwe Likes
G Shwe | May 13, 2021 | Celebrity | No Comments
ပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၁)ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေေ ကြာင့် ပြည်သူတွေနဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှ င်မောင်နှမတွေ က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပြည်သူေ တွနဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အနုပညာရှ င်တွေထဲမှာ ပိုပိုကလည်း လ မ်းမပေါ်ထွက်ကာ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရမယ့် သူတွေ ထဲတွင် ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် သူမရဲ့အိမ်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံလိုက်ရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင် ရက်ပိုင်းကဆိုရင် ပိုပိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကောလဟာလ တွေက ထွက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အိမ် ကလည်း အခုချိန်ထိ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက် မှန်းမ သိသေးတာကြောင့် မမှန်တဲ့ သတင်းတွေကို မတင်ကြဖို့ တောင်းဆိုထား တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့သူ ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရု ပ်ဆောင် Hu Go က “မပို အင်းစိန်ေ ထာင် ရောက်ပြီလို့ မိသားစုထံမှ သိရ ကျန်းမာပါစေ အမ 🙏”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်တွင် တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ကျန်းမာရေးမခြေ အနေတော့ မသိရသေးဘူး! သိရရင်ပြန် မျှဝေပေးပါ့မယ်! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောင်းတယ်! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီဒဏ်ကို အသာလေးကျော် လွှားနိုင်မှာပါ!သူအ တွက်လဲ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ပို့စ်အောက်တွင် ပရိသတ်တွေသိအောင် ထပ်ပြီးရေးသား မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပြီး ပိုပိုရဲ့ ပရိသတ်ေ တွကလည်း ကျန်းမာရေးေ ကာင်းမွန်ပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ထားကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ (၁)ရက္ေန႕ ကေန စတင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေျခအေနေတြေ ၾကာင့္ ျပည္သူေတြနဲ႕ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အႏုပညာရွ င္ေမာင္ႏွမေတြ က စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ လူထုလႈပ္ ရွားမႈေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ျပည္သူေ တြနဲ႕အတူ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွ င္ေတြထဲမွာ ပိုပိုကလည္း လ မ္းမေပၚထြက္ကာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳး စားခဲ့တဲ့ သူပဲျဖစ္ပါတယ္။
လူထု လႈပ္ရွား မႈေတြမွာ ပါဝင္ရင္း ၅၀၅(က)ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံရမယ့္ သူေတြ ထဲတြင္ ပါဝင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန ႕တြင္ သူမရဲ႕အိမ္တြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခံလိုက္ရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။အရင္ ရက္ပိုင္းကဆိုရင္ ပိုပိုနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး ေကာလဟာလ ေတြက ထြက္ရွိေနတာ ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕အိမ္ ကလည္း အခုခ်ိန္ထိ ဘယ္ေရာက္လို႔ ေရာက္ မွန္းမ သိေသးတာေၾကာင့္ မမွန္တဲ့ သတင္းေတြကို မတင္ၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုထား တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီေန႕ မွာေတာ့ သူမရဲ႕သူ ငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ု ပ္ေဆာင္ Hu Go က “မပို အင္းစိန္ေ ထာင္ ေရာက္ၿပီလို႔ မိသားစုထံမွ သိရ က်န္းမာပါေစ အမ 🙏”ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။”က်န္းမာေရးမေျခ အေနေတာ့ မသိရေသးဘူး! သိရရင္ျပန္ မွ်ေဝေပးပါ့မယ္! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုေတာ့ Will Power ေကာင္းတယ္! အဲ့ေတာ့ I HOPE So သူဒီဒဏ္ကို အသာေလးေက်ာ္ လႊားနိုင္မွာပါ!သူအ တြက္လဲ ဆုေတာင္း​ေပးၾကပါအုံး🖤”လို႔ သူရဲ႕ပို႔စ္ေအာက္တြင္ ပရိသတ္ေတြသိေအာင္ ထပ္ၿပီးေရးသား မွ်ေဝထားတာ ျဖစ္ၿပီး ပိုပိုရဲ႕ ပရိသတ္ေ တြကလည္း က်န္းမာေရးေ ကာင္းမြန္ၿပီး အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ထားၾကတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Credit;Hu Go FB Page
Tags:Hu Go, ပိုပို
ဖခင်ကြီး ရဲ့ တလပြည့်အလှူလေးကိုတောင် မိသားစုနဲ့ အတူ လိုက်ပါပြုလုပ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
အဖေများနေ့မှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို လွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ဖွင့်ဟ ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ သမီးလေး
သေနတ် ပစ်သင်နေတယ် ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ မေပန်းချီတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
လိုအပ်နေသောနေရာများသို့ အဝတ်အထည်များ စောင်များ အစားအသောက်များနှင့် ဆေးဝါးများကို လှူဒါန်းခဲ့သည့် ဆောင်းယွန်းစံ